Ubuso Obusha Be-E-Commerce: Umthelela Wokufunda Ngomshini Embonini | Martech Zone
Ingabe wake wacabanga ukuthi amakhompyutha angakwazi ukubona nokufunda amaphethini ukuze azenzele ezawo izinqumo? Uma impendulo yakho bekungucha, usesikebheni esifanayo nochwepheshe abaningi embonini ye-e-commerce; akekho owayengabikezela isimo sayo samanje.
Kodwa-ke, ukufunda ngomshini kubambe iqhaza elikhulu ekuthuthukisweni kwe-e-commerce emashumini ambalwa eminyaka adlule. Ake sibheke ukuthi i-e-commerce ikuphi manje futhi kanjani abahlinzeki besevisi yokufunda komshini izoyilungisa esikhathini esizayo esingekude kakhulu.
Yini Eshintshayo Embonini Ye-E-commerce?
Abanye bangakholelwa ukuthi i-e-commerce iyinto entsha eguqule indlela esithenga ngayo, ngenxa yentuthuko yezobuchwepheshe kulo mkhakha. Nokho, akunjalo ngokuphelele.
Noma ubuchwepheshe budlala indima enkulu endleleni esisebenzisana ngayo nezitolo namuhla, i-e-commerce isineminyaka engaphezu kwengu-40 futhi inkulu manje kunangaphambili.
Ukuthengiswa kwe-e-commerce emhlabeni wonke kufinyelele kumadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-4.28 ngo-2020, kanti imali engenayo ye-e-retail kulindeleke ukuthi ifinyelele kuma-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-5.4 ngo-2022.
Kodwa uma ubuchwepheshe buhlale bukhona, ukufunda ngomshini kuwushintsha kanjani umkhakha manje? Kulula. Ubuhlakani bokwenziwa bususa isithombe sezinhlelo zokuhlaziya ezilula ukuze kubonakale ukuthi zinamandla kangakanani, futhi ziguqula kanjani ngempela.
Eminyakeni yangaphambilini, ubuhlakani bokwenziwa nokufunda komshini bekungakathuthukisiwe futhi kulula ekusebenzeni kwakho ukuze kukhanye ngokweqiniso ngokwezinhlelo zokusebenza ezingase zisetshenziswe. Nokho, lokho akusenjalo.
Amabhrendi angase asebenzise imiqondo efana nokusesha ngezwi ukuze aphromothe imikhiqizo yawo phambi kwamakhasimende njengoba ubuchwepheshe obufana nokufunda komshini nama-chatbot buvame kakhulu. I-AI ingasiza futhi ngokubikezela kwempahla kanye nokusekelwa kwe-backend.
Izinjini Zokufunda Nokuncoma ngomshini
Kunemisebenzi eminingi emikhulu yalolu buchwepheshe ekuhwebeni kwe-e-commerce. Emhlabeni jikelele, izinjini zokuncoma zingenye yamathrendi ashisa kakhulu. Ungakwazi ukuhlola ngokucophelela umsebenzi we-inthanethi wamakhulu ezigidi zabantu usebenzisa ama-algorithms okufunda ngomshini nokucubungula amanani amakhulu wedatha kalula. Ungayisebenzisela ukukhiqiza izincomo zomkhiqizo zekhasimende elithile noma iqembu lamakhasimende (ukuhlukaniswa okuzenzakalelayo) ngokusekelwe kuzintshisekelo zabo.
Ungathola ukuthi yimaphi amakhasi amancane iklayenti eliwasebenzisayo ngokuhlola idatha enkulu etholiwe kuthrafikhi yewebhusayithi yamanje. Wawungabona ukuthi wayelandelani nokuthi wayechitha isikhathi sakhe esiningi kuphi. Ngaphezu kwalokho, imiphumela izonikezwa ekhasini elenzelwe wena siqu elinezinto eziphakanyisiwe ezisekelwe emithonjeni eminingi yolwazi: iphrofayela yemisebenzi yangaphambilini yamakhasimende, izinto ozithandayo (isb, izinto azithandayo), isimo sezulu, indawo, kanye nedatha yenkundla yezokuxhumana.
Ukufunda ngomshini nama-Chatbots
Ngokuhlaziya idatha ehlelekile, ama-chatbots anikwa amandla ukufunda komshini angadala ingxoxo “eyomuntu” nabasebenzisi. Ama-Chatbots angahlelwa ngolwazi olujwayelekile ukuze aphendule imibuzo yabathengi kusetshenziswa ukufunda ngomshini. Empeleni, lapho abantu abaningi i-bot ixhumana nabo, izoqonda kangcono imikhiqizo/izinsizakalo zesayithi le-e-commerce. Ngokubuza imibuzo, ama-chatbot anganikeza amakhuphoni aqondene nawe, aveze amathuba okuthengisa anamandla, futhi abhekane nezidingo zesikhathi eside zekhasimende. Izindleko zokudizayina, ukwakha, kanye nokuhlanganisa i-chatbot yangokwezifiso zewebhusayithi zilinganiselwa ku-$28,000. Imalimboleko yebhizinisi elincane ingasetshenziswa kalula ukukhokhela lokhu.
Ukufunda ngomshini kanye nemiphumela yosesho
Abasebenzisi bangasebenzisa ukufunda komshini ukuze bathole kahle abakufunayo ngokusekelwe embuzweni wabo wosesho. Amakhasimende njengamanje asesha imikhiqizo kusayithi le-e-commerce esebenzisa amagama angukhiye, ngakho-ke umnikazi wesayithi kufanele aqinisekise ukuthi lawo magama angukhiye anikezwe imikhiqizo efunwa ngabasebenzisi.
Ukufunda ngomshini kungasiza ngokubheka amagama angukhiye asetshenziswa kakhulu, kanye namabinzana afanayo abantu abawasebenzisayo embuzweni ofanayo. Amandla alobu buchwepheshe okufeza lokhu asukela ekhonweni lawo lokuhlola iwebhusayithi kanye nezibalo zayo. Njengomphumela, amasayithi e-e-commerce angabeka imikhiqizo enezinga eliphezulu phezulu kwekhasi kuyilapho ebeka phambili amanani okuchofoza nokuguqulwa kwangaphambilini.
Namuhla, imidondoshiya iyathanda EBay sebebonile ukubaluleka kwalokhu. Ngokuboniswa kwezinto ezingaphezu kwezigidi ezingu-800, inkampani iyakwazi ukubikezela futhi inikeze imiphumela yosesho efaneleke kakhulu isebenzisa ubuhlakani bokwenziwa kanye nezibalo.
Ukufunda ngomshini kanye ne-E-commerce Targeting
Ngokungafani nesitolo esiphathekayo, lapho ungakhuluma khona namakhasimende ukuze ufunde ukuthi bafunani noma bakudingayo, izitolo eziku-inthanethi zigcwele amanani amakhulu edatha yeklayenti.
Ngenxa yalokho, ukuhlukaniswa kweklayenti ibalulekile embonini ye-e-commerce, njengoba ivumela amabhizinisi ukuthi enze izindlela zawo zokuxhumana zifanele ikhasimende ngalinye. Ukufunda ngomshini kungakusiza uqonde izinto ezifunwa amakhasimende akho futhi uwanikeze ukuzizwisa kokuthenga okufanelana kakhulu.
Ukufunda Ngomshini kanye Nomuzwa Wekhasimende
Izinkampani ze-Ecommerce zingasebenzisa ukufunda ngomshini ukuze zinikeze ulwazi lomuntu siqu kumakhasimende abo. Amakhasimende namuhla awakhethi nje kuphela kodwa futhi afuna ukuxhumana nemikhiqizo yawo ayintandokazi ngendlela yomuntu siqu. Abathengisi bangakwazi ukuhlela ukuxhumana ngakunye namakhasimende abo besebenzisa ubuhlakani bokwenziwa nokufunda ngomshini, okuholela ekwazisweni kwamakhasimende okungcono kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, bangavimbela izinkinga zokunakekelwa kwamakhasimende ukuthi zenzeke ngokusebenzisa ukufunda ngomshini. Ngokufunda komshini, amanani okushiywa kwenqola ngokungangabazeki azokwehla futhi ukuthengisa kuzokwenyuka ekugcineni. Ama-bot asekela amakhasimende, ngokungafani nabantu, angaletha izimpendulo ezingachemile nganoma yisiphi isikhathi sosuku noma sasebusuku.
Ukufunda Ngomshini Nokutholwa Kokukhwabanisa
Okudidayo kulula ukukubona uma unedatha eyengeziwe. Ngakho-ke, ungasebenzisa ukufunda komshini ukuze ubone amathrendi kudatha, uqonde ukuthi yini 'evamile' nokuthi yini engekho, futhi uthole izexwayiso uma kukhona okungahambanga kahle.
'Ukutholwa kokukhwabanisa' kuwuhlelo oluvame kakhulu lwalokhu. Amakhasimende athenga amanani amakhulu okuthengiswayo ngamakhadi okuthenga ngesikweletu antshontshiwe noma akhansela ama-oda awo ngemva kokuba izinto sezilethiwe ayizinkinga ezivamile kubathengisi. Yilapho ukufunda komshini kungena khona.
Ukufunda Ngomshini kanye Namanani Anamandla
Endabeni yentengo eguquguqukayo, ukufunda ngomshini ku-e-commerce kungaba yinzuzo kakhulu futhi kungakusiza uthuthukise ama-KPI akho. Ikhono lama-algorithms okufunda amaphethini amasha kudatha liwumthombo walokhu kubaluleka. Ngenxa yalokho, lawo ma-algorithms ahlala efunda futhi ethola izicelo ezintsha namathrendi. Esikhundleni sokuthembela ekwehlisweni kwentengo okulula, amabhizinisi e-e-commerce angazuza kumamodeli aqagelayo angawasiza athole intengo efanelekile yomkhiqizo ngamunye. Ungakhetha okunikezwayo okuhamba phambili, amanani angcono kakhulu, futhi ubonise izaphulelo zesikhathi sangempela, ngaso sonke isikhathi ucabangela isu elingcono kakhulu lokukhulisa ukuthengisa nokuthuthukiswa kwempahla.
Izindlela ukufunda ngomshini okubumba ngazo imboni ye-e-commerce ziningi. Ukusetshenziswa kwalobu buchwepheshe kunomthelela oqondile ensizakalweni yamakhasimende nasekukhuleni kwebhizinisi embonini ye-e-commerce. Inkampani yakho izothuthukisa isevisi yamakhasimende, ukwesekwa kwamakhasimende, ukusebenza kahle, nokukhiqiza, futhi yenze izinqumo ezingcono zakwa-HR. Ama-algorithms wokufunda ngomshini we-e-commerce azoqhubeka nokuba yinsizakalo ebalulekile ebhizinisini le-e-commerce njengoba ethuthuka.
Buka Uhlu lwe-Vendorland Lwezinkampani Zokufunda Ngomshini
Tags: zamanani ashukumisayoe-commerceezokuhweba ngekhompyuthaizincomo zomkhiqizo we-ecommerceimiphumela yosesho lwe-ecommerceukuhlukaniswa kwe-ecommerceukutholwa kwenkohlisoukufunda imishiniukutholwa kokukhwabanisa komshini wokufundaukuhlukaniswa komshini wokufundaabahlinzeki besevisi yokufunda komshiniizinjini zokuncoma umkhiqizoimiphumela yosesho lomkhiqizoukwahlukanisa